Selett Botnet मालवेयर का चेतावनी
मालवेयर वा मालिसियस कम्प्युटर कोड 40० बर्ष भन्दा बढि भइसकेको छ, तर केहि संगठित सिर्जना गर्नको प्रयोग हाम्रो ध्यानमा आयो जब बोटनेटहरू १० बर्ष पहिले शुरू भएको थियो। Botnets इन्टरनेट मा केहि महंगा सुरक्षा घटनाहरु को लागी जिम्मेवार छन् र कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणको एक ठूलो संख्या संक्रमित छ। प्रत्येक महिना, धेरै कम्प्युटरहरू बोटनेटहरूद्वारा संक्रमित हुन्छन्, जसले ती उपकरणहरू बन्द गर्दछन्।
Artem Abgarian, को एक अग्रणी विशेषज्ञ Semalt , को botnet मालवेयर यसलाई कसरी सर्छ र काम छ के लेखमा बताउँछन्।
शब्द बोटनेटमा दुई फरक शब्दहरू छन्, नेट र बोट। बोटनेट संक्रमित कम्प्युटरहरूको समूह हो जुन botmasters को आदेश वा माग अनुसार बहु कार्यहरू गर्दछ। प्रत्येक दोस्रो कम्प्यूटर बोटनेट बन्न सम्भव छ उपायहरू लिईएको छैन, र तपाईंले एन्टि-मालवेयर सफ्टवेयर स्थापना गर्नुभएको छैन। बोटनेटहरू समूह र प्रणालीको विशाल संग्रह हो जुन केन्द्रीयकृत नेटवर्क वा अपरेटिंग प्रणाली मार्फत एक साथ जोडिएको छ। व्यक्ति जो मालवेयर चलाउँछन् वा लेख्छन् सबै उपकरणहरूमा लग इन गर्न सक्दैनन्, तर तिनीहरू निश्चित रूपमा तिनीहरूको कार्यहरू नियन्त्रण गर्न सक्दछन्।
कसरी मेरो कम्प्युटर बोटनेटको अंश हो भनेर कसरी पत्ता लगाउने?
यो पत्ता लगाउन सजिलो छ कि यदि तपाइँको कम्प्यूटर बोटनेटको अंश हो र तपाइँ तपाइँको उपकरणको प्रदर्शनमा यसको प्रभावको मूल्याate्कन गर्न सक्नुहुन्छ। जब कम्प्यूटरहरू बोटनेटको अंश हुन्छन्, तिनीहरू बिस्तारै काम गर्दछन् र तपाईंको निर्देशन अनुसार कार्य गर्दैनन्। यसका साथै वेबसाइटहरू राम्ररी लोड हुँदैनन्, र तपाईंको अपरेटिंग सिस्टमहरू धेरै प्रश्नहरूको साथ ओभरलोड गरिएका छन्। त्यस्ता ब्यबहारहरू देखा पर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले थाहा दिनुहोस् कि बोटनेटहरू अवस्थित छन्। तिनीहरूले हुन सक्छ वा तपाईलाई तिनीहरूको उपस्थितिको बारेमा केही थाहा दिन सक्छ किनकि बोटनेटहरू प्राय: चुपचाप काम गर्दछन्।
Botnets कसरी काम गर्छ?
हामीले पहिले नै वर्णन गरिसक्यौं, बोटनेट्सलाई केहि कार्यहरू गर्न निर्देशन दिइन्छ। तिनीहरू मुख्य रूपमा व्यक्तिगत जानकारी चोर्नका लागि जिम्मेवार छन् जस्तै क्रेडिट कार्ड विवरणहरू र उनीहरूको शान्त व्यवहारको कारण प्रयोगकर्ताहरूलाई नहुन सक्छ। बोटनेटहरू मुख्यतया मालिसियस कलाकारहरू प्रयोग गर्दछन्, जसलाई बोटमास्टरहरू पनि भनिन्छ। कमाण्ड र कन्ट्रोल सर्भरहरू बोटनेटहरू तल ल्याउने हो।
व्यापारी र घर प्रयोगकर्ताहरूका लागि जोखिमहरू:
बोटनेटससँग सम्बन्धित जोखिमहरू ईन्टरनेटमा मालिसियस प्रोग्रामहरू र शicious्कास्पद गतिविधिहरूको जोखिम जस्तै हुन्। उदाहरण को लागी, botnets तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी चोर्न र तपाइँको क्रेडिट कार्ड विवरण को लागी डिजाइन गरीएको छ। तिनिहरु तपाईको बौद्धिक सम्पत्ती, ब्लुप्रिन्ट, र पासवर्डहरु मा पनि पहुँच प्राप्त गर्दछ र कहिलेकाँही सम्बद्ध वेबसाइटहरु को लिंक मा क्लिक गर्न तपाईलाई बाध्य पार्छ। तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि तपाईंको कम्प्यूटर एक पटक संक्रमित भयो भने, यसले तपाईंको आवश्यकताहरूको रूपमा कार्य गर्दैन, तर ह्याकरले तोकेको कार्यहरू गर्दछ।
कर्पोरेट र व्यक्तिगत कम्प्युटरहरू बीचको रेखा धुमिलो छ। हामी सबै बोटनेट मालवेयरको शिकार हुन सक्छौं, र तिनीहरूबाट छुटकाराको एक मात्र तरीका भनेको एन्टि-मालवेयर प्रोग्राम स्थापना गर्नु हो। Botnet मालवेयर को पहिचान र रोक्नु भनेको तपाईको सुरक्षा अनलाइन सुनिश्चित गर्नु पर्छ। प्राविधिक दृष्टिकोणबाट, बोटनेटहरू एन्टि-मालवेयर वा एन्टिभाइरस प्रोग्रामहरूमार्फत रोक्न सकिन्छ। हामी नेटवर्क ट्राफिकमा संक्रमणहरू रोक्न सक्छौं र चाँडै नै तिनीहरूबाट छुटकारा पाउन सक्छौं।